XRP Ledger: Isi mmalite mepere emepe Blockchain Teknụzụ | Site na Linux
Dị ka anyị hụworo n'oge ndị na -adịbeghị anya, DeFi akporo na -apụtakarị ọ bụghị naanị maka Cryptocurrencies na akụ crypto ndị ọzọ nke ya mepere teknụzụ na ego gburugburu ebe obibi. Ọ bụrụ na ọ bụghị kwa, maka ọtụtụ ngwa ya, dị ka obere akpa, ozi na sistemụ ịkwụ ụgwọ, yana ngwa azụmaahịa ma ọ bụ nleba anya ahịa, n'etiti ndị ọzọ.
Dịka, maka ọtụtụ teknụzụ ya nke sistemụ ma ọ bụ ikpo okwu (netwọkụ) dabere na blockchains (blockchain). Ịbụ otu n'ime ha, "Ihe ndekọ ego nke XRP" nke bụ isi a teknụzụ blockchain mepere emepe, nke a na -ejikarị eme ihe na ngalaba ụlọ akụ mba ofesi. Nke kachasị, n'ihi na ọ na -arụ ọrụ na -enweghị ikike (enweghị ikike) yana n'ụzọ enweghị ike, na -ejikwa idozi azụmahịa ngwa ngwa (Site na 3 ruo 5 sekọnd).
Ma kemgbe, nke a Teknụzụ DeFi nwere njikọ chiri anya Kesawanye Akaụntụ Akaụntụ (DLT) na echiche ndị ọzọ, nke anyị lebara anya site n'oge ruo n'oge n'oge ndị gara aga, anyị ga -ahapụ njikọ nke ekwuru ozugbo gara aga metụtara posts. Ya mere, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, enwere ike ịgụ ha ngwa ngwa na ngwụcha akwụkwọ a:
"Teknụzụ Akaụntụ Ekesa, nke a makwaara site na nkenke okwu ya na Bekee DLT site na ahịrịokwu "Distributed Ledger Technology" a na -ejikarị na ngalaba mmepe nkeonwe, mana gụnyere teknụzụ Blockchain, nke bụ otu ihe ahụ mana ngalaba mmepe ọha. DLT na -ezo aka na teknụzụ n'ụzọ zuru oke, ya bụ, teknụzụ nke na -eme azụmahịa nwere ike ịntanetị na ụzọ echekwara yana na -enweghị ndị nnọchi anya, site na ọdụ data na -ekesa, nke na -ekwe nkwa enweghị ike na nchekwa nke data.. " Akụ Crypto na Cryptocurrencies: Gịnị ka anyị kwesịrị ịma tupu iji ha?
1 XRP Ledger (XRPL): ngọngọ agbachiri na ọha na eze
1.1 Kedu ihe bụ XRP Ledger?
1.2 Banyere XRP, Ripple na ndị ọzọ
1.2.3 Gbagọrọ agbagọ
XRP Ledger (XRPL): ngọngọ agbachiri na ọha na eze
Kedu ihe bụ XRP Ledger?
Dị ka ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị site na ndị nrụpụta teknụzụ «XRP Njikwa», ọ bụ:
"Ihe ngwangwa na -adigide ma na -adigide, blockchain ọha na nke na -agbasaghị, nke otu ndị mmepe ụwa na -arụ. Nke ahụ pụtara maka ịdị ngwa ngwa, ịrụ ọrụ ike yana ntụkwasị obi. Maka nkwado ya nke ọma iji zụlite mmepe n'ime ya, ọnụ ahịa azụmaahịa ya dị obere yana nnukwu ndị ọkachamara na -enye ndị mmepe ntọala siri ike mepere emepe iji rụọ ọrụ ndị kacha achọsi ike, na -enweghị mmebi dị ukwuu na gburugburu ebe obibi.. "
Ha na -agbakwunye na Weebụsaịtị gọọmentị GitHub ihe onwunwe nke "Ripple", teknụzụ ahụ kwuru, sị:
"Edebere akwụkwọ ndekọ ego na-agbasaghị site na netwọkụ nke sava ọgbọ na ibe (P2P). Nke na -ejikwa algọridim na -anabata mmejọ nke Byzantine ọhụrụ iji dozie ma dekọọ azụmahịa na nchekwa data kesara echekwara n'enweghị onye ọrụ etiti.. "
Cheta na: Kemgbe isiokwu nke Algọridim nkwekọrịta na Teknụzụ DLT dị ogologo nke ukwuu, enwere ike inyocha njikọ ndị a maka ozi ndị ọzọ: 1 njikọ y 2 njikọ.
Banyere XRP, Ripple na ndị ọzọ
Nyere, Ihe ndekọ ego nke XRP (XRPL) Ọ bụ teknụzụ mepere emepe nke onye ọ bụla nwere ike wulite oru ngo, nke a na -abụkarị nke ọma site na ọrụ na òtù dị iche iche ndị ọzọ jirila ha mee ihe. N'etiti ndị a, anyị nwere ike ịkọwa ihe ndị a:
Cryptoactive ma ọ bụ cryptocurrency ala nke XRP Ledger nke na -arụ ọrụ na RippleNet (Platform Payment Digital) nke n'aka nke ya, na -arụ ọrụ na XRP Ledger (nchekwa data nkesa nkesa). Ụlọ ọrụ Ripple mepụtara ya ka ọ bụrụ ngwa ngwa, dị ọnụ ala ma bụrụ nke ọzọ nwere ike ịdaba na akụ dijitalụ ndị ọzọ dị ugbu a na usoro ịkwụ ụgwọ ego dị ka SWIFT. Ya mere, ọ bụ akụ ọha, nke enweghị ndị otu, emebere ka ọ bụrụ akwa n'etiti ọtụtụ ego Fiat dị.
Ụlọ ọrụ nkeonwe wuru ma na -arụ ọrụ ịkwụ ụgwọ na netwọk mgbanwe akpọrọ RippleNet na XRP Ledger. Ebumnuche ya bụ isi bụ ijikọ ụlọ akụ, ndị na -akwụ ụgwọ na mgbanwe akụ nke dijitalụ, na -eme ka ịkwụ ụgwọ zuru ụwa ọnụ ngwa ngwa na abawanye uru. Ọ na -ejikwa XRP enyere aka n'ịwụnye Ịntanetị nke Uru ka ego wee nwee ike ịkwaga ngwa ngwa yana rụọ ọrụ nke ọma dị ka ozi na -eme taa.
Ngwanrọ sava na -enye ike XRP Ledger. Ọ dị n'okpuru ikikere ISC na -enye ohere. Ọzọkwa, edere ya na C ++ ma na -agba n'ọtụtụ nyiwe. Mgbe ọ na -arụ ọrụ na ọnọdụ nkwado, ọ na -enye ohere njikọ na netwọk ndị ọgbọ XRP Ledger, ibughari azụmaahịa bịanyere aka na cryptographically, yana idobe otu mpaghara mpaghara nke akwụkwọ ndekọ aha zuru ụwa ọnụ zuru oke, ya bụ, nke XRP Ledger (kesara ọdụ data nke nkesa).
Netwọk ịkwụ ụgwọ dijitalụ nke ụlọ ọrụ a na -akpọ Ripple, nke na -enye njikọ na ọtụtụ narị ụlọ ọrụ ego gburugburu ụwa site na otu API, na -enye ohere ịme azụmahịa azụmahịa fiat ngwa ngwa, dị ọnụ ala ma dabere karịa maka ndị niile metụtara ya.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịbanye n'ime ihe niile metụtara faịlụ teknụzụ mepere emepe de "XRP Ledger", Ripple, RippleNet na XRP enwere ike inyocha njikọ 2 ndị a: 1 njikọ, 2 njikọ y 3 njikọ.
Na nkenke, "Ihe ndekọ ego nke XRP" bụ akwụkwọ akụkọ teknụzụ mepere emepe sitere na ngalaba DeFi, dabere na iji Blockchain ma ọ bụ DLT, nke na -eto eto na nkuchi site n'aka ngalaba ụlọ akụ mba ofesi, iji nye ndị ọrụ ya na ndị ahịa ya ọrụ ka mma, ngwa ngwa karịa na ntụkwasị obi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » XRP Ledger: Teknụzụ Blockchain na -enye aka